Helen Mirren kwere nkwa na ya ga-abụ nwanyị kachasị njọ!
Ọhụụ Helen Mirren nwere mmetụta na onyinye ELLE Women In Hollywood kwa afọ. Ọ bụghị nanị na ọ ghọrọ onye nnọchiteanya maka ihe ndị dị ịrịba ama na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ, mana o kwukwara okwu nke jupụtara n'okwu ọjọọ na okwu ọjọọ. Ugbua, e hotara ya na Hollywood nile.
Okwu na-eme ka ihe na-egbuke egbuke!
Helen Mirren na-enwekarị aha ọjọọ, ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ a maara nke ọma nke eze, ọ ga-enwe ike ịnweta nkwenye na nkwupụta. N'okwu ekele ya, Helen kwuru banyere ihe nyeere ya aka ịmalite ọrụ ya. Ma enwere nkwenye dị ukwuu mgbe onye omeewu gụrụ akụkọ banyere ntuli aka na-abịanụ na United States na onye otu n'ime ndị na-ese okwu - Donald Trump.
Helen, ya na coquetry ya, kwuru, sị:
Iji hụ na ọ dịghị onye ọ bụla n'ime ha na-akwa ụta maka nhọrọ ha na-ahọrọ m maka "Nkọwapụta" Nhọrọ maka ihe ịga nke ọma ha na ụlọ ọrụ ihe nkiri ahụ, ana m ekwe nkwa ịbụ ihe kachasị njọ nke ụmụ nwanyị ọjọọ niile.
Ụlọ na-eto ma na-enwe obi ụtọ na Helen. Ogologo oge gara aga, Donald Trump, n'oge arụmụka nhoputa ntuli aka, nyere onwe ya nkwupụta dị otú ahụ na Hilary Clinton:
Lee nwanyị jọgburu onwe ya!
Enweghị ezi arụmụka mgbe arụrịta ụka ahụ mere ka ọ bụrụ egwuregwu obi ọjọọ, ma, ọzọ, mebiri aha ọjọọ ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmadụ. Mkpesa nke inwe mmekọahụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọkachamara na-enweghị ike, ọchịchọ nke ịkwụsị ntuli aka ya site na nhoputa ndi ochichi, ọdịdị nke ọtụtụ memes na Intanet - meriri ọnọdụ ya n'ụzọ dị ukwuu. Ihe ekwenyeghi na Helen, ma n'oge gara aga, nkwado nke ndi oru ama ama, ndi egwu na ihe nlereanya nke Hilary Clinton, gbakwunyere onye omekorita okwu.
Atụmatụ sitere n'aka Helen Mirren nye ụmụ nwanyị na-enwe ọganihu
Helen weputara akụkụ dị ukwuu nke okwu ya na ndụmọdụ maka ụmụ nwanyị ndị na-aga ọrụ ugbu a:
Nke mbụ, ịkwesịrị ịkwụsị ịṅụ mmanya na ọṅụṅụ, ọ bụ naanị n'ụbọchị ezumike ị nwere ike inweta ụdị obi ụtọ a, ma ọ bụghị ya! Bụrụ oge ị ga - eji oge gị na onye ị hụrụ n'anya mee ka ị mara ihe ha chọrọ. Ekwela ka gi na onye gi na ibe gi kw us i, gi na onye ob ula na-elek ota gburugburu ebe obibi gi, na-ekwur ita okwu na nd i mmad u na-akpachi anya! Na-elekọta "I" gị ma leghaa mkpesa nke ọdịdị gị anya, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ site na aha ọjọọ na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ site na onye omempụ pompous na isi obere na crocodile n'aka ndị isi obodo.
Helen Mirren banyere anwansi nke ngwá agha na ihe nkiri ọhụrụ "Winchester. Ụlọ nke wuru ghosts »
Oscar 2018 - akwa - uwe kachasị mma na uwe kachasị mma nke ememe mmeri ahụ
Tequila, scooter na omume rụrụ arụ: Helen Mirren dị afọ 72 gburu onye ọ bụla nọ Oscar
A na-akwado okwu okwu Helen site n'oké ovation. Ruo ugbu a, dị ka onye na-eme ihe nkiri ahụ kwuru:
Ịbụ nwanyị na-asọ oyi bụ ihe na-enye otuto!
Tony Braxton ama ọdọ ndọ
Tom Hardy na nwunye ya
Ihe ndekọ nke Bella Potemkina
A mara nwunye nke oge Patrick Swayze ikpe nke anyaukwu
Joseph Gordon-Levitt buru ụzọ gosi nwa ya nwoke
A na - eji ihe ọhụrụ dị egwu na - ewu ewu nke kachasị mma "ọnụ"
Di m bụ Megan Fox chọrọ nnọọ nwa nwanyị, onye omeeji ahụ nwere ekele maka ya maka ... mkpụrụ ndụ dị mma
Jenny Shimizu na Angelina Jolie
Celine Dion achọtara ezigbo ala: ụlọ ya na Florida mesịrị chọta onye nwe ya
Victoria Beckham keere òkè ya na ballet nke nwa ya nwanyị dị afọ isii Harper
Melanie Griffith boro akwụkwọ akụkọ ahụ
Demi Moore n'oge ọ bụ nwata
Ọ bụ Suzane Vieira mara mma afọ 75?
Giselle Bundchen wee pụta n'elu ala mita 150, na-emepe ememme Olympics na Rio
Isiokwu n'elu nke a na-ekwu banyere nkume na-arụ
Chicken paprikas - uzommeputa
Igwe ụkwara ume na-egbuke egbuke
Uwe ejiji na ala
Ọ ga-ekwe omume ịgbanye mama m na-enye nri?
Igbe nke ndị na-eji ihe ịchọ mma
Ndozi maka bat
Princess Diana na obi mgbawa Hassnat Khan
Curbs maka nwa nwa
Bipute ọgazị ụkwụ
Esi gbuo onye vampire?
25 foto, nke ihere nke ndị òtù ezinụlọ eze ukwu nke Great Britain
Ụlọ nke Itukushima
A na-eme nnukwu fim ahụ bụ "Batman vs. Superman" na New York
Mbadamba ụrọ maka nwa akwụkwọ
Nhazi poteto si Colorado ebe tupu akuku
Esi eji eriri arafatka n'isi ya?
Neuritis nke akwara auditory - mgbaàmà, ọgwụgwọ
Bolognese ihendori n'ụlọ - uzommeputa
Mkpụrụ osisi a mịrị amị maka ọnwụ
Wepụ na ikpu